घर / ब्लग / Th चीजहरू जुन एक महान रसोईको नल बनाउँदछ
2020 / 11 / 08 वर्गीकरणब्लग 1471 0
विशाल बहुमतको लागि, भान्सा पकाउने ठाउँ मात्र होइन। वास्तविकतामा, हामी हाम्रा किचनहरू अनावश्यक, मिलिling्ग, चिन्तनको लागि प्रयोग गर्दछौं। हालको भान्साइहरू थप व्याकुलताहरूलाई विचारको रूपमा लिनुपर्दछ। तिनीहरू हाल संकुचनको लागि हामीले चाहिने चीज मात्र बाध्य गर्दैनन् तर थप टिभी, संगीत केन्द्रित, तखता, अनुकूलन गरीएको सामान र केहि बढिमा मात्र धुन्छौं। भान्सा असाधारण छन्, चीजहरू जसमा उनीहरूसँग पोसाक गरिएको छ।
जे भए पनि, त्यहाँ एक चीज छ जुन प्राय: सबै उन्नत भान्छामा हुन्छ। यो लगातार छ, शान्त र नम्र। हामी नियमको रूपमा यसको वास्तविकतालाई कम महत्त्व दिन्छौं। यद्यपि त्यहाँ अरू केहि पनि छैन जुन हाम्रो भान्छाको सामान्य प्रकृतिमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
फलदायी नल जस्तो वाह नल भान्सालाई अविश्वसनीय देखिन्छ र राम्रोसँग कार्य गर्दछ। हामीलाई यस्तो भान्साकोठामा लामो समयसम्म रहन र धेरै पटक फिर्ता आउन मन पर्छ। वा फेरी, अप्रत्याशित रूपमा, जब नल निराश हुन्छन्, हामी भान्साकोठालाई यति धेरै कदर गर्न सक्दैनौं।
मैले एक अनलाइन अनुसन्धान गरे, सबैभन्दा प्रसिद्ध मोडलहरूमा हेरे, यो वस्तुको चित्रण र ग्राहक अडिटहरू पढें, र मैले सातवटा चीजहरू पाए जुन असाधारण नल बनाउँदछ।
एउटा असाधारण भान्साको नलको ब्रान्ड छ
साच्चिकै, मैले बुझें कि किन कारणको लागि कसैले पनि एक गैर चिह्नित नल छनौटको रूपमा विचार गर्नुपर्छ। के व्यक्तिहरूलाई लाग्छ कि उनीहरू बचेछन्? हुन सक्छ यो हुन सक्छ, यो सहि छैन। वास्तवमा तिनीहरू ठूलो भ्रामक छन्। गैर चिह्नित faucets चाँडै नै नष्ट। तिनीहरू भाँच्दछन्, ट्रिक्ल्छन्, रिलीज गर्छन्, पानी बेवास्ता गर्छन् र आफ्ना मालिकहरू कब्जामा राख्छन् र राम्रोको लागि खर्च गर्छन्।
यो केवल हामीले नाम मात्र तिर्ने छैन। यो निर्भरता हो, सबैभन्दा ताजा प्रगतिहरू कार्यान्वयन गरियो, ग्राहक समर्थन अफिसमा सहयोग पुर्‍याउन तयार छ जुन हामी मुद्दामा चल्छौं, ग्यारेन्टी गर्नुहोस् कि प्रायः नलहरूको लागि आजीवन हो। केही पैसा बाँच्नुहोस् र यी सबै गुमाउनुहोस्। सबै सेट?
त्यहाँ ब्राण्ड र निर्माताहरूको विस्तृत चयन छ जुन उत्कृष्ट, दक्ष र भरपर्दो faucets बनाउँदछ। केवल एक छनौट गर्नुहोस् तपाईंको स्वाद र आवश्यकताहरू द्वारा संकेत गरे अनुसार। केवल याद गर्नुहोस् कि "मेड इन चाइना" एक ब्रान्ड नाम होईन।
एउटा असाधारण भान्साको नल भान्साको भित्री संग राम्ररी संगृण गर्दछ
सबै कुराहरु विचार गरीन्छ, तपाईले यो परिप्रेक्ष्यमा अलि धेरै आउन आवश्यक पर्दछ। के उपयोगिता र अटुट क्वालिटी धेरै उच्च आवश्यकताहरू छैनन्? साँच्चै, तिनीहरू छन्। हुन सक्छ यो हुन सक्छ, व्यावहारिक र भरपर्दो को वर्तमान मा सबै सम्मानित ब्रांड बाट faucets को लागी एकदम नियमित छ। त्यसोभए कन्फिगरेसनले निर्णय लिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्वहरू मध्ये एक पाएको छ। बिभिन्न चीजहरूको बारे निश्चित भएकोले, हामी अब नलहरू पर्याप्त ढीला आँखाहरूसहित देख्न सक्दछौं र देखिन अझ बढी ध्यान दिनेछौं।
आकार अनन्त छन्। एक अधिक महत्वपूर्ण नजर मा, जे भए पनि, पाँच वर्ग मान्यता प्राप्त हुन सक्छ:
माथिल्लो दुईको संयोजन
अधिकांश भागको लागि काट्ने किनारा मैकेनिकल संरचनामा गम्भीर गोल र खोक्रो वा फनेल आकारका आकारहरू हुन्छन्। प्रकृति प्रेरित संरचनाहरु बोट र प्रकृति वस्तुहरु पछि लाग्छ। धेरै थोरै faucets, हुन सक्छ यो यस्तो, एक unadulterated शैली हाइलाइट। नियमित रूपमा हामी ती दुईको संयोजन भेट्छौं।
रेट्रो faucets लगातार मुख्यधारा र अवधि शैली किचनको लागि प्रयोग गरिएको छ, जबकि अन्वेषकहरू स्प्रिंग्स, पासो र अन्य बहादुर गुणहरू र फ्रिलको अप्रत्याशित मिश्रणहरू सहित सुसज्जित छन्। ती दुबैलाई सम्बन्धित शैलीको किचनको आवश्यकता छ र अधिक सीधा मोडेलहरू भन्दा समावेशीय प्रयोगको पर्याप्त कम छ।
एक अविश्वसनीय किचन नल परिचय र काम गर्न गाह्रो तर केहि छ
स्थापनाले आवश्यक DIY क्षमताको साथ एक व्यक्तिको लागि १० मिनेट भन्दा बढी लिन हुदैन, पुरानो नललाई हटाईयो। मूलतः, यो सिink्क वा लेजमा रहेको खाली ठाउँमा डुबकी पाउँदैछ, नलको ख्याल राख्दै, यसलाई नट (वा नट) मा पेचमा राखेर सौंछ र सम्झौताका अंशहरू न्यानो र चिसो पानी आपूर्तिसँग जोड्दछ। । फिक्सिंग, लोचदार गस्केटहरू र तुलनात्मक चीजहरूसँग नियमित रूपमा कुनै खेल हुँदैन किनकि संघहरू हालसम्म पानी जस्तो छ जस्तो देखिन्छ।
ह्यान्डलले तापमान र स्ट्रिमको गुणवत्ता सजिलै र निश्चित रूपमा परिमार्जन गर्दछ। यो सि s्क र विगतमा सबैतिर स्ट्रिमको समन्वय गर्न कल्पना गर्न सकिन्छ।
स्प्यालेबल स्पडको टाउकोको नलहरूमा नली कुनै मेहनतको साथ स्लाइड हुन्छ। यो भित्र नलको बडी सम्पर्क गर्दैन र प्रभावकारी रूपमा टाउको मा परिचय अभिमुखीकरण माध्यम जान्छ। स्प्याश हेड आश्वासनको साथ कनेक्ट हुन्छ, र यसको झुकाव कहिल्यै स्वतन्त्र हुने छैन। केहि नल मोडेलहरूले स्प्याश हेड सेटअप गर्न ठोस चुम्बकको उपयोग गर्दछ।
पुल-डाउन faucets साधारणतया एक स्प्रि util प्रयोग कि तिनीहरूलाई पछि धारक फिर्ता फिर्ता बनाउँछ जब बाहिर तानिएको थियो। एक सभ्य नलमा, नुहाउने टाउको सामान्यतया मानव द्वारा समन्वय नगरिकन धारकमा फिर्ता फर्किन्छ।
मोड्ने दायरा स्पउटलाई उचित स्थितिमा राख्नको लागि पर्याप्त फराकिलो छ तपाइँको हुनु पर्छ।
अविश्वसनीय भान्साको नल जीवनकालको लागि रिलीज बिना नै हो
धुने धुलो र ग्याकेटहरूसँगको व्यवसायसँग विगतको स्थान छ। भल्भहरू उन्नत भए। हार्ड फायर सर्कलहरू, अब र फेरि बहुमूल्य ढु stone्गाको साथ सुरक्षित गरिएको, सबै उद्देश्य र उद्देश्यहरूका लागि नल बनाउँन गाह्रो बनाउँदछ। तिनीहरू आफ्नो जीवनभर सबै छोड्दैनन्, र ह्यान्डलले तापमान र निर्णायक रूपमा प्रवाह गर्दछ।
एउटा असाधारण भान्साको नलसँग स्वतन्त्रता हुन्छ जसले ठूलो भाँडो र कन्टेनर पनि यसको अन्तर्गत जान दिन्छ
एक नल कम छ कि बंद मौका मा, यो वास्तव मा यो डरलाग्दो छ कि संकेत गर्दैन। सिink्कको गहराइलाई मा आकस्मिक तपाईं अझै सम्म यो तल धेरै ठूलो भाँडा राख्न र धोउन को लागी तयार हुन सक्छ। हुनसक्छ यो गर्नुहोस्, किनकि नलको सीमित कदले गर्दा, तपाईंले यसलाई समय समयमा तपाईंको मार्गबाट ​​बाहिर निकाल्न आवश्यक पर्दछ। गम्भीर सम्झौता होईन, म सहमत छु। हुन सक्छ यो हुनुहोस्, किनकि तपाईं हाल अत्यन्तै अनौंठो नलपछि हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठूलो भान्सेको चीज प्राप्त गर्नु फाइदाजनक हुन सक्छ जुन यस नलको मुखा धुने छ, र नलको घुमाउरो कत्रो उच्च मापन हुनुपर्दछ जुन तपाईंलाई अवसरको लागि अनुमति दिन सक्छ। कुनै पनि घटनाको विकासको, जब तपाईं ती विशाल चीजहरू धुँदै हुनुहुन्छ।
जे भए पनि, बढाइचढाइ नगर्न सावधान रहनुहोस्। सबै परिस्थितिहरूमा जस्तै, तर्कसंगत यहाँ एक सभ्य सल्लाहकार हो। अफ मौकामा तपाईं, उदाहरणका लागि, एउटा विशाल आकारको ग्रिड र विभिन्न चीजहरू धेरै साना हुन्, थालको आकारको लागि नल छान्नु अनावश्यक बढी हुन सक्छ।
अघिल्लो :: के गर्ने जब भान्छाको नल खरीद गर्ने अर्को: किन सहि किचनको नल फरक पार्छ